သတင်း - ကာဗွန်ဖိုင်ဘာအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်များဖွဲ့စည်းခြင်း
3D ပုံစံ Carbon Fiber
ပုံသွင်းနည်း၊ Hand paste lamination method၊ vacuum bag hot pressing method၊ winding molding method နှင့် pultrusion molding method အပါအ ၀ င်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာဖွဲ့စည်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အသုံးအများဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်သည်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာအလိုအလျောက်အစိတ်အပိုင်းများသို့မဟုတ်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာစက်မှုအစိတ်အပိုင်းများကိုအဓိကအသုံးပြုသောပုံသွင်းနည်းဖြစ်သည်။
စျေးကွက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်ရသောပြွန်များကိုအများအားဖြင့်ပုံသွင်းနည်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောပတ်ပတ်လည်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာပြွန်များ၊ ကာဗွန်စတုရန်းချောင်းများ၊ octagonal booms နှင့်အခြားပုံစံမျိုးစုံပြွန်များကဲ့သို့။ ပုံသဏ္carbonန်ရှိကာဗွန်ဖိုင်ဘာပြွန်အားလုံးကိုသတ္ထုမှိုဖြင့်ပြုလုပ်သည်၊ ထို့နောက်ချုံ့ပုံသွင်းသည်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်မှာနည်းနည်းကွဲပြားတယ်။ အဓိကကွာခြားချက်မှာမှိုတစ်ခု (သို့) မှိုနှစ်ခုဖွင့်ရန်ဖြစ်သည်။ ပတ် ၀ န်းကျင်ပြွန်သည်အလွန်ရှုပ်ထွေးသောဘောင်မရှိသောကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်အတွင်းနှင့်အပြင်အတိုင်းအတာနှစ်ခုလုံး၏သည်းခံစိတ်ကိုထိန်းရန်လုံလောက်သည်။ ပြီးတော့အတွင်းနံရံကချောမွေ့တယ်။ ကာဗွန်ဖိုင်ဘာစတုရန်းပြွန်များနှင့်ပိုက်ပုံစံမျိုးစုံများကိုမှိုတစ်မျိုးတည်းသာသုံးလျှင်သည်းခံမှုသည်ထိန်းချုပ်ရလွယ်ကူပြီးအတွင်းပိုင်းအတိုင်းအတာသည်အလွန်ကြမ်းတမ်းသည်။ ထို့ကြောင့် ၀ ယ်သူသည်အတွင်းစိတ်အတိုင်းအတာ၌သည်းခံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မြင့်မားသောလိုအပ်ချက်မရှိလျှင် ၀ ယ်သူသည်အပြင်ဘက်မှိုကိုသာဖွင့်ရန်အကြံပြုလိမ့်မည်။ ဤနည်းဖြင့်ငွေကိုချွေတာနိုင်သည်။ သို့သော် ၀ ယ်သူသည်အတွင်းစိတ်ခံနိုင်ရည်ရှိရန်လိုအပ်ချက်များရှိလျှင်ထုတ်လုပ်ရန်အတွင်းနှင့်အပြင်မှိုကိုဖွင့်ရန်လိုသည်။
1. ပုံသွင်းနည်း။ Prepreg အစေးကိုသတ္တုမှိုထဲသို့ထည့်ပါ၊ အပိုကော်ကိုပြည့်လျှံစေရန်ဖိအားပေးပြီး၎င်းကိုအပူလွန်ပြီးနောက်နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်တစ်ခုအဖြစ်ပြုလုပ်ရန်မြင့်မားသောအပူချိန်တွင်၎င်းကိုကုသပါ။
၃။ ဖုန်စုပ်အိတ်ကိုပူအောင်နှိပ်သည့်နည်းလမ်း။ ပုံစံခွက်ကိုအဖုံးအုပ်ပြီးအပူခံရုပ်ရှင်ဖြင့်ဖုံးပါ၊ ပျော့ပျောင်းသောအိတ်ကပ်နှင့်အဖုံးကိုအပူပေးပြီး autoclave တွင်အခဲပြုလုပ်ပါ။
4. အကွေ့အကောက်များသောပုံသွင်းနည်း။ ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ monofilament သည်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာပြွန်များနှင့်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာထုတ်ကုန်များပြုလုပ်ရန်သင့်တော်သောကာဗွန်ဖိုင်ဘာရိုးတံပေါ်တွင်ဒဏ်ရာရသည်။
5. Pultrusion နည်းလမ်း။ ကာဗွန်ဖိုင်ဘာကိုလုံးဝစိမ့်ဝင်သွားပြီးပိုလျှံသောအစေးနှင့်လေများကို pultrusion ဖြင့်ဖယ်ရှားပြီးမီးဖိုထဲတွင်ကုသသည်။ ဤနည်းလမ်းသည်ရိုးရှင်းပြီးကာဗွန်ဖိုင်ဘာကြိမ်လုံးပုံသဏ္ဌာန်နှင့် tubular အစိတ်အပိုင်းများကိုပြင်ဆင်ရန်သင့်တော်သည်။
၄ လွှာ၊ #၃၄၈-၃၊ AiNan လမ်း၊ LongGang ခရိုင်၊ Shenzhen၊ GuangDong၊ တရုတ်
©မူပိုင်ခွင့် - ၂၀၂၁ - Shenzhen Feimoshi Technology Limited မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည်။